महिला अधिकार र कार्यान्वयनको पक्ष | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / महिला अधिकार र कार्यान्वयनको पक्ष
महिला अधिकार र कार्यान्वयनको पक्ष
Posted by: युगबोध in विचार February 20, 2018	0 114 Views
हामी जहिले पनि महिला अधिकारका सवालमा कुरा गर्दा महिलालाई धे रै अधिकार भएको कुरा चर्चामा आएको सुन्छांै  । तर संविधान र कानूनका ठे लीमा अधिकार प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनमा कन्जुस् याइ“ भएको दे खिन्छ ।
महिला अधिकारको चर्चामा सम्पत्तिसम्बन्धी कुरा निकै चल्ने गर्छ । तर त्यसको बारे मा भने ध्यान गएको दे खिन्न । श्रीमानको नाममा अचल सम्पत्ति भए पनि श्रीमानले श्रीमतीको नाममा जग्गा गराई दिन चाहन्नन् । श्रीमतीको मन बिग्रिहाल्यो भने के गनेर् ? घरायसी मे लमिलाप भएन भने समस् या आउ“छ कि भन्ने मनो दशाले ग्रसित छन् । श्रीमान श्रीमतीबीच बे मे ल हु“दाका बखत श्रीमतीले अंश सहित छुटापत्रका लागि अदालतमा गएपछि अशंसहित सम्बन्ध बिच्छे द गनेर् र पाएको सम्पत्ति आफूखुशी गर्न पाउने व्यवस् थाले मात्रै बाध्य भएर श्रीमानबाट सम्पत्ति पाउने गरे का छन् । आफूखुशी अचल सम्पत्ति नाममा राखिदिने पुरुषहरु बिरलै पाइन्छन् । त्यसो त जग्गा जमिनमा चार विगाहको हद लगाएपछि आप्mनो जग्गा जो गाउन नक्कली अशंबण्डा गरे र श्रीमतीको नाममा जग्गा पास गरिदिएका उदाहरण जमिनदारहरुमा छ । अविवाहित छो रीले अंश पाउने तर विवाहपछि फर्काइदिनुपनेर् कानुनी व्यवस् थाले त्यस् तो अंश अविवाहित र बिहे नहुने परिस् िथतिका महिलामा सीमित छ ।
झट्ट हे र्दा महिलालाई सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रशस् त दिएको जस् तो लागे पनि यस् तो अधिकार आफूखुशी दिन चाहन्न को ही पनि । यस् तो अधिकार लिन अदालतको ढो कासम्म पुग्नुपर्छ । घर व्यवहारमा हे र्नुस् एउटी नारी विवाह भएर अरुको घरमा जान्छे , आज के पकाउने ? के कपडा धुने ? घरमा के काम गनेर् भन्ने कुराको निर्णय समे त आफूखुशी गर्न पाउन्नन् । आफ्नो सासुको आदे शमा चल्नुपर्छ । घरको दै निकी काम कति झमे लापूर्ण हुन्छ । मे हे ने तको हिसावले उसको कुनै कामको मूल्यांकन ह“ुदै न । कुनै गृहिणी महिलालाई तपाइ“ के काम गर्नुहुन्छ भने र सो ध्यो भने के ही नाई भन्ने जवाफ दिनुको अर्थ घरायसी कामको अवमूल्यन हो भन्ने लाग्छ ।
आर्थिक समानताका कुरा गर्दा समान कामको समान ज्याला कानूनले तो के को छ । तर काम गराउ“दा ठे के दारहरुले पुरुष ले वरलाई पा“च सय दिएको छ भने महिलालाई चार सय मात्र । पुरुषलाई चार सय दिएको रहे छ भने महिलालाई तीन सय ज्याला दिएको पाइन्छ । खै त समान कामको समान ज्यालाको अधिकार ?
महिलाहरुको राजनीतिमा सहभागिताको चर्चा गर्दा राजनीति पनि पक्षपात छ । राजनीतिमा पनि पुरुष ने ताहरुले महिलाहरु माथि शंका गर्छन् । उनीहरुको मानसिकतामा महिलाहरु कम सक्षम हुन्छन् । जिम्मे वारीबो ध गर्न सक्दै नन् । प्रतिस् पर्धा गर्दा पछाडि पर्छन् कि भन्ने मनो रो गबाट ग्रसित छन् राजनीतिक ने ताहरु ।
भर्खरै सम्पन्न स् थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले दे खिसक्यौ ं सबै दलका ने ताहरुले ३३ प्रतिशत सिटमा महिलाहरुलाई उम्मे दवारी दिएनन् । यो संकीर्णता हो भन्ने कुरा सजिलै बुझन सकिन्छ । यसको प्रतिफल राष्ट्रियसभा र प्रदे श सभामा ३३ प्रतिशत को टा पु¥याउन बाध्य भएर ठाउ“ दिनुपरे को कुरा घाम झै छर्लंग छ । राजनीतिमा पनि चाकरी र चापलुसी जुनसुकै पार्टीमा हुन्छ । त्यसको शिकार महिलाहरु भएका छन् । टिकट पाउन हो स् वा मनो नित हुन हो स् कुनै कुराबाट पार्टीलाई धक्का पुग्ने काम गरे पछि मात्र अवसर पाउने गरे का उदाहरण नभएका हो इनन् । यस विषयमा दलहरुले फराकिलो दृष्टिको ण वनाउन जरुरी छ ।
सरकारले रो जगारीका लागि ३३ प्रतिशत अवसर छुट्याएको छ । कुनै पनि सरकारी निकायमा महिला को टा र खुला गरी दुई भागमा बा“डिएको हुन्छ । यहा“ महिलाहरुले पुरुषहरुस“ग प्रतिस् पर्धा गर्न सकिन्न कि भने र महिला को टामा मात्र निवे दन हाल्ने गरे को पाइन्छ । महिला सक्षम हुने हो भने खुला प्रतिस् प्रर्धामा आउन सकिन्छ । यसकारण महिला को टाका विज्ञापन खुलामा पनि दिन पाउने भएकाले दुई विज्ञापनको सदुपयो ग गर्न शिक्षित महिलाहरु पछाडि पर्नु हुन्न । सरकारले सकभर घर पायक र श्रीमानको रो जगार जहा“ छ त्यहा“ सरुवा गर्नु पनेर् नीति भए पनि व्यवहारमा त्यस् तो दे खिदै न । महिलाहरुलाई स् वे च्छिक स् थानमा दरबन्दी मिलान गरी दिनुपर्छ । तर त्यो भन्दै मा महिलाहरु खटाएको ठाउ“‘‘मा काम गर्न जा“दै नन् वा सक्दै नन् भन्ने चाहि“ हो इन । एउटै ठाउ“मा रह“दा उनीहरुका बालबच्चाहरुको हे रचाह र पढाइ रे खदे खमा सजिलो हुन्छ भन्ने आशय हो  । अहिले सम्म महिलाहरुको समस् यालाई सूक्ष्म रुपमा हे नेर् हो भने महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, शै क्षिक र स् वास् थ्यसम्बन्धी अधिकारहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै हो  ।
ने पाल सरकारले बहुविवाहलाई पूर्ण निरुत्साहित गरे को पाइदै न । बहुविवाह गरे मा कै द तथा जरिवाना गनेर् कानून बने पनि बहुविवाह गर्न नपाइने र गरिहाले े को खण्डमा त्यस् तो विवाह स् वतः बदर हुने कानून ल्याउन जरुरी छ ।
एकातिर कुनै महिलालाई कसै ले बलात्कार ग¥यो भने बलात्कारीलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनको साटो श्रीमतीलाई श्रीमानबाट छाड्ने छो डाउने तर्फ हाम्रो समाज उन्मुख छ । जसबाट घर बिग्रने अवस् था सिर्जना भएका छन् । वरु समाज मे लमिलाप गराउने तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । हरे क संस् थामा महिला सहभागिता हो स् भने र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को षाध्यक्ष र सचिवजस् ता पदमा एकजना महिला र सदस् यको सिट पनि आफ्नो हिसावको संख्या हुन्छ । ३३ प्रतिशत सहभागिता रहनुपनेर् कानुनी व्यवस् था भएपछि वाध्यताले गर्दा सहभागी बनाउने गरे को पाइन्छ । तर व्यवहारमा के दे खिएको छ भने प्रक्रिया मिलाउन पद दिने तर जिम्मे वार नसम्झने गरे को दे खिन्छ । कुनै संस् थामा वा उपभो क्ता समितिमा महिला सचिव भए पनि माहन्यूट उठाउन समितिभित्रका पुरुष अघि सर्छन् । को षाध्यक्षको जिम्मे वारी दिए पनि हिसावकितावमा पनि पुरुषहरु अघि सनेर् गरे को दे खिन्छ । राख्नै पनेर् नाममा को टा पु¥याउन तर काम गर्न नदिने पनि धे रै छन् ।
हरे क कामको जिम्मे वारी दिदा मे रो यो काम गर्न सक्छु म सक्षम छु भने र महिलाहरुले पद लिनु पर्छ । को षाध्यक्ष हुने हिसाव किताव नजान्ने जस् ता काममा महिलाहरु अघि बढ्नुह“ुदै न । पद लिन्छु काम अकैर् ले गर्दिहाल्छन् भन्यो भने पदबाट पलायन हुने अवस् था सिर्जना हुन सक्छ । यसर्थ महिला अधिकारका लागि कानूनभन्दा कार्यान्वयन र दिने भन्दा अधिकार लिने चनाखो हुन जरुरी छ ।
Previous: १२ जिल्लाका खे लाडी तुलसीपुरमा
Next: समाजवादी शिक्षा, के सम्भव छ ?